Imbali kunye nekhaya elihle lelizwe. - I-Airbnb
Imbali kunye nekhaya elihle lelizwe.
Isacholo esiyimbali eseti kwindawo emangalisayo siyakwamkela kwaye siyakumema ukuba uphumle kwaye ube namava obomi belizwe laseIreland. Thatha indawo kwaye ukonwabele ukuhlala kwakho.
Ikhaya eliphangaleleyo, elizolileyo elinemibono yalo ephefumlayo yendawo eluhlaza inika indawo yokuphumla, eyomelezayo yokuhlala kunye nexesha elininzi lakho kunye nosapho lwakho.
Indlu yelizwe yothando ukusuka malunga ne-1750 ivelele ngamagumbi ayo amnandi alishumi elinambini kunye nengaphakathi lawo eliphakathi. Isakhiwo samatye esinendawo yokuhlala malunga ne-320 square metres sakhiwe ngendlela yendabuko yase-Irish kwaye ekuqaleni yayisetyenziswa njengendawo yokuhlala yasehlotyeni.
Chitha iingokuhlwa zothando phambi kweziko okanye wonwabele uxolo noxolo kwelinye lamagumbi atofotofo, athokomeleyo.
I-Knockvicar House enamagumbi ayo okulala amane awodwa kunye negumbi lokuhlala elikhulu lasekhaya linegumbi lokuhlambela elikhulu elinebhafu kunye nendlu yangasese kunye namagumbi okuhlambela amabini aneshawa kunye nendlu yangasese. Ikhitshi langoku, elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-dishwasher kunye ne-oveni likumema ukuba upheke kwaye uzonwabisa ngokutya okumnandi.
I-Knockvicar ilali eku-County Roscommon, eIreland. Ime kwindlela yengingqi i-R285, phakathi kweBoyle kunye neCarrick-on-Shannon kufutshane neLough Key Forest Park kumantla edolophu.
I-Knockvicar ilele kwi-Arigna Scenic Drive ngaphandle kwendlela u-N4 ukusuka eDublin ukuya eSligo
Kulapho umdlali we-actress uMaureen O'Sullivan echithe inxalenye yobutsha bakhe.
Kwibhulorho yaseKnockvicar, uDonal Cam O'Sullivan Bere, iNkosana yaseIreland, emva kokoyiswa kwakhe eCork ngo-1603 wahamba kwilali yaseKnockvicar apho abantu bakhe baphumla okokugqibela ngaphambi kokuba bafike kwinqaba yase-O'Rourke kwilali yaseLeitrim.
Ngasekupheleni kweXesha Eliphakathi iKnockvicar yayiyindawo yendlu kaFrancisan
Umlambo iBoyle, oqukuqela phantsi kwebhulorho yaseKnockvicar, udibana neLough Key ngendlela enqumlayo kunye namasango atshixeyo eClarendon ama-300m ukuya phezulu. Abantu banokumisa kufutshane nebhulorho baze bahambe ecaleni kwendlela.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Boyle